टुँडालमा कुंदिएका सम्भोग कला यस्ता छन्
Posted: 2018-07-09 07:04:55
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं -मानिसमा यौनोच्छा जागृत गराउन प्राचीन कालमै मन्दिरजःतो पवित्र र सार्वजनिकःथलमा यौनकर्ममा लिप्त मूर्ति राख्ने प्रचलन थियो । विभिन्न आसनमा यौनकर्ममा लिप्त देवदेवीका त्यःता मूर्तिबाट मानिसमा यौनोत्तेजना विकास गर्न टुँडाल या मन्दिरमा त्यःता कलाकृति राख्ने प्रचलन रहेको थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने प्राचीनकालीन हाम्रो समाज यौनसम्बन्धी मान्यता निकै उदार थियो र यसलाई पवित्र कामका रुपमा लिइन्थ्यो । ...
महिला यस्तो सेक्स चाहान्छन् – अध्ययन
Posted: 2018-07-08 07:21:37
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सेक्सका लागि कुन चीजले कसैको मुड ‘अन’ गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन थोरै गाह्रो छ । यदी तपाईलाई आफ्नो पार्टनर एड्भेन्चर मनपर्छ भने ऊ खाली बेडमा मात्रै सीमित रहँदैन । एक अनलाइन डेटिङ वेबसाइटद्धारा हालै एक पोल सुरु गरियो, जसको माध्यमबाट सेक्सका दौरान महिलालाई कुन चीजले ‘अन’ अर्थात् यौनका लागि उत्तेजित गराउँछ ?...
कस्तो शैली मन पर्छ महिलालाई यौनसम्पर्कको ?
Posted: 2018-07-07 06:35:45
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कःतो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ?...
Posted: 2018-07-05 21:16:37
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — महिला हिंसाविरुद्धको अभियानलाई विषय बनाइएको ‘अदालत’ को छायांकन सकिएको छ । फाल्गुनन्द लिङदेन फिल्म्सको प्रःतुति रहेको फिल्ममा दिनेश लिङदेनको निर्देशन छ । फिल्ममा महिला हिंसासँगै अपहरणलगायत विभिन्न आपराधिक कार्य्विरुद्ध रहेको उनले जनाए । ‘पीडितको पक्षमा न्यायिक कुरालाई उठाएका छौं,’ उनले भने । फिल्म उपत्यकाका विभिन्न ःथानमा छायांकन गरिएको हो।...